Doorashada Itoobiya:- Xisbi Ku Baaqay In Sannad Kaddib Laqabto Doorasho Loo Dhan Yahay | Gaaroodi News
Doorashada Itoobiya:- Xisbi Ku Baaqay In Sannad Kaddib Laqabto Doorasho Loo Dhan Yahay
June 25, 2021 | Published by: Tifaaftiraha
Xisbiga mucaaradka ee Oromo Federalist Congress (OFC) oo aan ka qayb gelin doorashadi 21-kii June ka dhacday Itoobiya ayaa ku baaqay hal sano kaddib in la qabto doorasho loo dhan yahay.
Bayaan doorashada ku aaddan oo uu soo saaray xisbiga OFC ayuu ku faahfaahiyey qodobbo uu sheegay iney xal u noqon karaan arrimaha ku gadaaman doorashooyinka.
Xisbiga Oromo Federalist Congress (OFC)
Xisbiga Mucaaradka ee OFC ee qowiyadda Oromada wuxuu soo jeediyey saddex qodob oo uu sheegay haddii ay dowladdu raacdo iney xal u noqon karaan madmadowga iyo muranka hareeyey doorashada Itoobiya .
Qodobbadaasi oo ay kala ah, in la dhiso dowlad loo dhan yahay si loo sii wado isbeddelka uu xisbigu ku sheegay inuu ‘fashilmay’, in la sameeyo dib u heshiisiin qaran oo loo dhan yahay iyo in la diyaariyo qorshe suurageliya sidii ay dalka Itoobiya hal sano kaddib doorasho uga dhici lahayd.
Bayaanka waxaa kale oo lagu sheegay in xisbiga OFC marar badan uu ku celceliyey in doorasho ay la socon dib u heshiisiin qaran iney cidna anfaceyn, balse dhanka dowladda cid maqasha uu ka waayey taasina ay keentay “inuu dalku xaaladba xaalad ka sii cakiran uga sii gudbo”.
Xisbiga OFC wuxuu doorashada uu qaadacay marki la xirxiray qaar ka mid ah hoggaamiyayaashiisa iyo kuwa OLF, xafiisyadoodina albaabbada la isugu dhuftay.
Waxaa kale oo bayaanka OFC lagu sheegay doorashada dalka Itoobiya ka qabsoontay 21-ka June iney ahayd mid aan loo dhameyn shacabkuna si buuxda uga qayb qaadanin. Andualem Arage
Xisbiga Caddaaladda Bulshooyinka Itoobiya (EZEMA)
Xisbiga EZEMA oo ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee doorashada 6-aad ee Itoobiya ka dhacday ka qayb galay wuxuu sheegay iney jiraan cabashooyin badan oo geeddi socodka codbixinta la xiriira oo ay guddiga doorashooyinka u gudbiyeen. Balse guddigu haddii ay cabashooyinka xsbiga jawaab ku haboon ay ka bixin waayaan ay cabashadooda maxkmad u gudbinayaan.
Xisbiga oo xaruuntiisa dhexe shir jaraa’id ku qabtay wuxuu sheegay codbixinta doorashada ka hor iyo kaddibba khaladaadki uu xisbigu ku arkay goobaha doorashooyinka kala duwan uu ka tartamay inuu guddiga doorashooyinka uu u gudbiyey.
“Waxaan sugeynaa guddiga doorashooyinka inta uu natiijada doorashada kaga dhawaaqayo, haddii uu guddiga cabashada aan u gudbinnay uu sidii la rabay jawaab uu uga bixin waayo maxkamad ayaan ku kala baxaynaa” ayaa lagu yiri shirka jaraa’id ee Xisbibiga EZEMA.
Guddoomiyaha xisbiga Yeshiwaas Asefa wuxuu sheegay cabashooyinka ugu badan uu xisbiga ka cabanayo iney ka dhaceen deegaannada Amxaarada, Shucuubta Koonfureed iyo Magaalada Addis Ababa.
“Shacabka haddii uusan na dooran go’aanka shacabka si buuxda ayaan ugu hoggaansameynaa una ixtiraameynaa” ayuu yiri Guddoomiyaha Xisbiga EZEMA Yeshiwaas Asefa
Doorashada Itoobiya ka dhacday oo ay isu diiwaangeliyeen codbixiyeyaal ka badan 37 malyan, 47 xisbina musharrixiintooda ay tartameen, ayaa goobihi aysan doorashada ka dhicin guddiga doorashooyinka wuxuu sheegay iney ka dhaceyso 6-da bisha September.
Deegaannada Soomaalida, Hararida iyo deegaan doorashooyin ku yaalla deegaannada Benishaangul-Gumuz, Shucuubta Koonfureed, Oromada iyo Amxaarada oo amni darro doorashadi ka dhici lahayd ayaa dib loo dhigay